SQ: Magaalaa Naqamteetti ajjeechaan suukanneessaa akka geggeeffamu ajajni darbe. – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooSQ: Magaalaa Naqamteetti ajjeechaan suukanneessaa akka geggeeffamu ajajni darbe.
Magaalaa Naqamteetti ajjeechaan suukanneessaa akka geggeeffamu ajajni darbe.
Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo (SQ) | Sadaasa 3, 2020
Akkuma beekamu magaalaa Naqamtee keessatti humna waraanaa mootummaatiin yeroo adda addaatti ajjeechaan uummatarratti raawwataa ture. Torban tokko dura humni waraanaa PP dargaggoota 4 bakka tokkotti ajjeesuun ni yaadatama. Bu’uuruma kanaan dargaggoo Daani’eel Eebbisaa erga hidhanii booda guyyaa kaleessaa galgala (Sadaasa 2/2020) mana hidhaa keessatti ajjeesaniiru. Akka odeessi nu ga’e ibsutti dargaggoo kana arraba kutanii bifa suukanneessaan akka ajjeesan himame.
Guyyoota itti aanan 7’f magaalaa Naqamtee keessatti sakatta’insi qaamota waraanaa PPn akka geggeeffamuufi namoota shakkaman irratti tarkaanfiin akkeechaa akka fudhatamu walga’ii qaamonni nageenyaa taa’an irratti akka murtaa’e odeeffannoon nu ga’e ni ibsa.
Kanuma waliin dargaggoota 4 yeroo darbe ajjeefaman waliin namoonni hariiroo qaban irrattis tarkaanfiin akka fudhatamu ajajni darbeera. Kanas kan godhan bilbila dargaggoota ajjeefamanii keessaa lakkoofsa bilbilaa namoota isaan waliin hariiroo qabanii sakatta’iin akka ta’e beekameera.
Kana waan ta’eef, hawaasni magaalaa Naqamtee of eeggannoo akka taasisan gamanumaan dhaammanna.
Yerroon kun hamituudha, tarkanifin oromo irratii fudhatama jiruu bayee nama gadisisa. Kanaf yommiyuu callaa oromon wal ijaaruun, odduu halan mirekanessanii walliif dabaressun, ajjandaa oromo lafaa kawataanii funduratii dhibuun bayee barebaachissadha. Kana godhudhaf wajiraa siyassa ottoo hin jedhiin hundiinu, ottoo irraa hin maqiin, odduu adda adda tiin hin burejaje’en ajjandaa oromo funduratii demisisuun barebaachissaadha. Wan hundaa kessattii ajjendaa oromo funduratii demesisuun hojja issaa dura ta’uu qaba. Hojjaan xiyeefaanaa aregachuu qabu ajjendaa oromo funduratii ademsisu dha akka illaleecha kotii.